Commissioner-ka Police-ka DDS maka Aqoon baa inuu Hal dhinac Eeda saaro mise Waa kadhab? | ogaden24
Commissioner-ka Police-ka DDS maka Aqoon baa inuu Hal dhinac Eeda saaro mise Waa kadhab?
Madaxa Police-ka dawlada deegaanka Somaalida Maxamed Cali Xasan oo wax laga waydiiyay xiisad waxa uu ka Og-yahay kooxo xiisad ka abuuraya magalada Jigjiga, ayaa si Khayru masuul-nima ah waxa uu u weeraray Taageerayaasha Jabhada ONLF ee magaalada Jigjiga.
Cali Xasan oo ay kamuuqato Aqoondaro iyo Khibrad la’aan dhinaca shaqada iyo Heerka masuuliyadiisa ayaa kudooday inay Og-yihiin in kooxo magaca ONLF wata ay abuurayaan Qalalaase, kuwaasi oo sida uu sheegay iyada oo aan wali laga soo kaban dhibaatadii Hore Jigjiga uga dhacday magaalada kudhex daabacanaya calanka ONLF!.
Commissioner Maxamed Cali Xasan maadaama uu yahay masuulka ugu sareeya Police-ka oo ah Hay’ada u xilsaaran ilaalinta Amniga deegaanka iyo kahortaga dambiyada, maxay tahay sababta uu ONLF oo xiligaasi uuna Hal ruux kajoogin Jigjiga uu dusha uga saarayo dambiga mise wuxuu Hayaa cadaymo muujinaya kaalintii ONLF kulahayd mashaqadii Jigjiga?.
Taliye Cali Xasan maxay tahay sababta ay Indhihiisu u Qaban waayeen kuwa Jigjiga shirka kuqabsaday ee waliba ku Hanjabay lana Taagan inaysan ONLF Jigjiga imaan karin mise isaga iyo kuwaasi aragtida ayay kamidaysan yihiin? oo marka oo leeyahay calanka ONLF ayaa Jigjiga dhib looga abuurayaa Afkii kooxdaas ayuu kuhadlayaa?.
Su’aasha kale ee iswaydiinta mudan ayaa ah sababta Commissioner-ku isugu xidhayo Qalalaasihii kooxda Cabdi iley Horay uga Gaysatay magalada Jigjiga iyo calamada Taageerayaasha ONLF ku muujinayaan dareenkooda Taageero ee ay u Hayaan Jabhada ONLF, U Jeedkiisa rasmiga ah se miyuusan ahayn inaan Jigjiga lagu Qaadan karin calanka iyo Astaamaha ONLF iyada oo kii Gimbot 7- iyo OLF ay Gawaadhida kusharaxan yihiin.
Si kastaba Ha ahaatee Commissioner-ka waxaa masuuliyadiisu tahay inuu bulshada si dhex-dhexaad ah ugu adeego kalana saaro aragtida siyaasiga ah iyo shaqada laxidhiidha Amniga, waana inuu ka digtoonaadaa si xun u isticmaalka magaca Jabhada ONLF Gafka iyo Khaladkii kadhacayna uu Raali Galin buuxda kabixiyaa Waayo ONLF Waa dhiiga iyo dhacaankii bulshada Somaaliyeed lamana Aqbali karo in si fudud waxaanay ahayn loogu tilmaamo.